Warshad Soosaarida Buufinta Biyaha - Soosaarayaasha Soosaarayaasha Buufinta iyo Alaab-qeybiyeyaasha
Biyo Ku buufin Biyo
Dhinacyada lagu buufiyo aargudasho
Soo Celinta Tooska ah ee Tooska ah
Steam & Hawada Soo Celinta
Buufinta Biyaha Iyo Soo Celinta Rotary
Quusitaanka Biyaha Iyo Soo Celinta Rotary
Steam Iyo Rotary Retort
Nidaamka Dib-u-Celinta ee aan toosnayn
Nidaamka Dib-u-soocelinta Dufcadda otomaatiga ah
Nadiifiyaha Hydrostatic ee joogtada ah
Soo Celinta Qalabka
Aargudashada Saldhigga Tray
Shayga Lakabka Labaad
Suufka Lakabka Hybrid
Soo Celinta Tamarta
La xiriir DTS
Takhasus ku ah suuxdinta • Diiradda SAAR-DHAMMAAD
Dhinacyadu waxay buufiyaan jawaab celin
Soo-celinta jeermiska looga buufiyo biyaha
Kuleylka oo ku qabow kuleylka kuleylka, sidaas darteed uumiga iyo biyaha qaboojintu ma sumeynayaan alaabta, mana loo baahdo kiimikooyin lagu daweeyo biyaha. Hawsha biyaha waxaa lagu buufiyaa badeecada iyada oo loo marayo bamka biyaha iyo sanqadhaha loo qaybiyay dib-u-celinta si loo gaaro ujeedada jeermiska. Heerkulka saxda ah iyo xakamaynta cadaadiska waxay ku habboonaan kartaa noocyo kala duwan oo ah alaabooyin la soo baakadeeyay.
Kuleylka oo ku qabow kuleylka kuleylka, sidaas darteed uumiga iyo biyaha qaboojintu ma sumeynayaan alaabta, mana loo baahdo kiimikooyin lagu daweeyo biyaha. Biyaha hawshu si siman ayaa looga kala qaadaa min kor ilaa hoose iyada oo loo marayo bamka biyaha qulqulka badan iyo saxanka kala-sooca biyaha ee dusha sare ee dib-u-celinta si loo gaadho ujeeddada jeermiska. Heerkulka saxda ah iyo xakamaynta cadaadiska waxay ku habboonaan kartaa noocyo kala duwan oo alaabooyin ah oo baakadeysan. Astaamaha fudud ee lagu kalsoonaan karo waxay ka dhigaan dib u soo celinta DTS jeermiska taranka si ballaaran loogu isticmaalo warshadaha cabitaanka Shiinaha.
Kuleylka oo ku qabow kuleylka kuleylka, sidaas darteed uumiga iyo biyaha qaboojintu ma sumeynayaan alaabta, mana loo baahdo kiimikooyin lagu daweeyo biyaha. Hawsha biyaha waxaa lagu buufiyaa badeecada iyada oo loo marayo bamka biyaha iyo sanqadha lagu qaybiyo afarta gees ee sagxad kasta oo retort ah si loo gaadho ujeedada jeermiska. Waxay damaanad qaadeysaa isku mid ahaanta heerkulka inta lagu jiro kuleylka iyo marxaladaha qaboojinta, waxayna si gaar ah ugu habboon tahay alaabada lagu soo ridayo bacaha jilicsan, gaar ahaan ku habboon alaabada kuleylka u nugul.
Cinwaanka: dts aagga warshadaha, zhucheng, gobolka shandong, pr china
Telefoon: +86 536-6549353